पाना धातु हाइड्रोलिक सीएनसी प्रेस ब्रेक 2.4 मीटर लम्बाइ - Bambeocnc
नाम: शीट मेटल हाइड्रोलिक सीएनसी प्रेस ब्रेक 2.4 एम लम्बाइ
कुञ्जी शब्द: 2.4m प्रेस ब्रेक
हाइड्रोलिक प्रणाली र वाल्व: जर्मनी बोस्न रक्स्रथ
मिसिन प्रकार: हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक
नियन्त्रण प्रणाली: DA41 DA56 DA66 विकल्प
ब्रेक सुविधा थिच्नुहोस्: उच्च प्रस्तुतिसँग बल पेंच
मोटर बैंड: सीमन्स मोटर कतरनी मिसिन
बेंडिंग मशीन प्रकार: सीएनसी हाइड्रोलिक
ब्रेक सामग्री थिच्नुहोस्: धातु स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील एल्युमिनियम
मुहर रिंग: VALQUA-JAPAN
कच्चे माल: आयरन प्लेट
1. सबै इस्पात वेल्डेड संरचना, एकीकृत उपचार (कम्पन युनियन, गर्मी उपचार) ताप लाई रोक्न को लागी, राम्रो कठोरता र स्थिरता छ।
2. रैक को हीट उपचार, सम्पूर्ण मिसिन मा कठोरता अनुकूलन सत्यापन र हाइड्रोलिक मुआवजा को संरचना को संयुक्त रूप देखि एमबी 8 सीरीज प्रेस ब्रेक को झुकने को सटीक सुनिश्चित सुनिश्चित।
3. केवल एक उत्पाद प्रोग्रामिंग तुलसी हुन को लागि सामाग्री को विशेषताहरु को परिचय, उत्पादन को आयामहरु र आवश्यक टूल्सिंग र मर्छ। सबै भन्दा राम्रो मोडा चक्र को लागि अनुकूलन सफ्टवेयर खोजहरु।
4. रियर ब्लक दूरी, माथि स्ट्रोक, बिजुली समायोजन, म्यानुअल ठीक समायोजन उपकरण, डिजिटल डिस्प्ले।
5. रैखिक ट्राईड्युडरर, दबाब आनुपातिक वाल्व र सर्वो मोटर सहित आयोत।
6. राम स्ट्रोक (Y1, Y2) र ब्याकगाज (एक्स, आर, जेड) स्वचालित रूपमा नियन्त्रक द्वारा नियन्त्रित हुन्छ, उच्च उत्पादकता।
7. इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक आनुपातिक सर्वो समिकरण को लागी। स्ट्रोक अन्तर्गत वैकल्पिक बिन्दु नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। Y अक्षहरूको परिमार्जन गर्नुहोस्: ± 0.01mm, पैरालिज्ज: 0.02 मिमी। विचलन प्रतिरोध को मजबूत क्षमता।
8. ब्यागागेजले बल-असर पेंच र रोलिंग डाइरेक्टरी, द्रुत गति र उच्च दोहोरी पोजीटिङ् परिशुद्धता। एक्स अणुलाई रिजोल्युशन 0.1mm सँग स्वीकार्छ।
(1) तपाईंको अनुरोधको बारेमा, उत्तम उपयुक्त मिसिनलाई तपाईलाई सिफारिस गरिनेछ, अनुकूलित मेशिन पनि समर्थन गर्दछ;
(2) तपाईंको देशका आवश्यकताहरूबारे, केहि प्रमाणपत्रहरूले तपाईंलाई साईनसन मद्दत पुर्याउनेछ। CE, CO, FORM-A, FORM-E, FORM-F, जस्तै Embassy.etc द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र।
(3) सबै मेशिन डिलिनु अघि परीक्षण गरिनेछ, र हामी भिडियो र तस्विरहरू तपाईंलाई लिन सक्नेछौं। जब तपाइँ यसलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, यसले सीधा काम गर्न सक्छ।
(1) हामी सबै नियन्त्रण प्रणाली आपूर्ति गर्नेछौं र सफ्टवेयरले मैनुअल सञ्चालन गर्दछ, यसैले तपाइँ मेशिन चलाउन सजिलै संग यो गर्न सक्नुहुन्छ।
(2) सबै मेशिन समस्या, तपाईले मलाई कुनै पनि समय सोध्न सक्नुहुनेछ, हामी तपाईंलाई अनलाइन तरिकाले समाधान गर्न मद्दत गर्नेछौं, वा पहिलोपटक टेलि, इमेल, टाढाको भिडियो, यदि यी सबैले तपाइँको समस्या समाधान गर्न सकेन भने, हाम्रो इन्जिनियर तपाईंको कारखानालाई स्पेसमा मद्दत गर्न।
मेशिन कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर सिक्नको लागी हाम्रो कारखानामा स्वागत छ, तपाई एक साथ एक ईन्जिनियरिङ् संग मिलेर यो सेवा निःशुल्क।
एक वर्ष को लागी सम्पूर्ण मेशिन को लागी, उपभोक्ताहरु को एक वर्ष को भित्र उपभोग वाला उपभोग को छोड दिए को कुनै पनि हिस्सेहरु, हामी तपाईंलाई मुफ्त को लागी केहि भागहरु पठाउछौं।